साताको तस्वीर : गल्कोटमा रोपाईँ ! – ebaglung.com
साताको तस्वीर : गल्कोटमा रोपाईँ !
२०७४ जेष्ठ २२, सोमबार १५:१२	Footer Slider, Full Slider, Top News, अन्य समाचार, विचित्र
गल्कोट २०७४ जेठ २२ ।यतिबेला बागलुङ जिल्लाको गल्कोट उपत्यकामा धान रोपाईँ सुरु भएको छ । सिँचाईको सुविधाले गर्दा जिल्लाका अन्य भागहरुभन्दा गल्कोटमा छिट्टै धान रोपाईँ गरिन्छ । धान खेतीको पकेट क्षेत्र मानिने गल्कोट उपत्यका भएर बग्ने दरमखोला, गौदीखोला, चमुवाखोला, हलुवा खोला र अन्य ठाडा खोलाहरुबाट पानीको प्रयाप्त सुविधा हुनाले यहाँका किसानहरुले जेठ महिनाका दोश्रो हप्ता अगावै देखी धान रोपाई थालेका हुन् भने असारको पहिलो साता सम्ममा धान रोपाई सकिने स्थानीय कृषकहरुले बताएका छन् ।
गल्कोट उपत्यकाका बाहेक जिल्लाका सिचाईँ सुविधा भएका अन्य केहि भागहरुमा पनि फाटफुट धान रोपाई सुरु गरिसकिएको छ ।
जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका अधिकृत बिप्लव अधिकारीका अनुसार जिल्लामा ६ हजार हेक्टर जग्गामा धान खेती गरिन्छ भने गल्कोट क्षेत्रमा मात्र झण्डै ९ सय हेक्टर जग्गामा धान खेती हुन्छ ।
गल्कोट नगरपालिकाका साविक दुदिलाभाटी, नरेठाँटी, हटिया, हरिचौर, काँडेवास, मल्म गाविसहरु बढी धान उत्पादन हुने स्थान हुन् । अहिले यी क्षेत्रहरुमा धान रोपाई सुरु भैसकेको छ । धान प्रमुख खाद्यान्न बाली भएकालेपनि स्थानीयहरु बढी उत्साहपूर्वक धान रोपाईमा जुटेको देख्न सकिन्छ ।
हल गोरुले जोत्दै आएको खेत केहि वर्ष यता ट्याक्टरले जोत्न थालिएको बताउछन हरिचौरका दिनेश खत्री । पहिले पहिले जस्तो धान रोपाईमा हिलो छेपाछेप गर्ने, गीत गाउने, हिलो खेल्ने आदि रमाईला कार्यक्रमहरुमा केहि कमी आउन थालेको उनको भनाई छ । तैपनि गोरुले हलो जोतर खेतीपाती गर्ने परम्परा अभैm देख्न सकिन्छ ।
मल्मका पत्रकार थम्मन थापा सन्देशका अनुसार एक हप्ता पहिले देखी धान रोप्न सुरु भएको हो । अहिले किसानहरु धान रोपाईको चापाचापमा रहेका छन् । त्यस्तै काँडेवासका लक्ष्मण चालिसेले पनि काँडेवास र यस वरपर धानरोपाईँ सुरु भैसकेको बताएका छन ।
सन्चारकर्मी गुमानसिँह भण्डारीले दुदिलाभाटी, नरेठाँटी, हटिया, मजुवा फाँट लगायतमा किसानहरु धमाधम धान रोपाई गरिरहेको जानकारी दिएका छन् भने मल्मका मित्रमणि खरेलले किसानहरुलाई धान रापाईले भ्याई नभ्याई भएको बताएका छन् ।
तस्वीर: सन्चारकर्मी गुमानसिँह भण्डारी- हटिया, दिनेश खत्री- हरिचौर, थम्मन थापा सन्देश- मल्म’ लक्ष्मण खरेल, काँडेवास ।
हटिया र सेरा बजार सरसफाई गर्दै गल्कोटमा मनाईयो विश्व वातावरण दिवस !